न्यूयोर्कका डा.मरासी जसले गरे ९ हजार महिलाको यौनांगको शल्यक्रिया | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
न्यूयोर्कका डा.मरासी जसले गरे ९ हजार महिलाको यौनांगको शल्यक्रिया Home
न्यूयोर्कका डा.मरासी जसले गरे ९ हजार महिलाको यौनांगको शल्यक्रिया न्यूयोर्कका डा.मरासी जसले गरे ९ हजार महिलाको यौनांगको शल्यक्रिया Feb 18, 2017 13:02
5.2K0comments
एजेन्सी । न्यूयोर्कका स्त्री यौनअंगका सर्जन डा. अमिर मरासीलाई भेजिना वीस्पेरीयर अर्थात महिलाको यौन अंगको साथी भनेर चिनिन्छ ।
उनले भेजिनोप्लाष्टि अर्थात महिलाको यौनअंग सर्जरी गरेर उत्कृष्ट बनाउने काम गर्छन । यनले यसैमा ख्याति कमाएका पनि छन् । उनले प्रत्येक वर्ष ८ देखि १ सय महिलाको उनीहरुकै इच्छा अनुसार यौनअंग सर्जरी गरी आकार र रगं भनेजस्तै बनाइदिन्छन् ।
उनको क्लिनिकमा सन् २०१३ देखि हालसम्म ९ हजार महिलाले आफ्नो यौन अंग सर्जरी गरी आकार र रंग बनाइदिएका छन् ।
डा.मरासीलाई नै खोज्दै आफ्नो गोप्य यौन अंगको आकार मिलाउन यति धेरै महिला आउनुको दुई कारण छन् । पहिलो महिलाहरुले यौन सम्पर्कको समयमा असहज महशुस हुने समस्यालाई उनले कस्मेटिक सर्जरी मार्फत उनीहरुको इच्छा अनुसार आकार र यौनअंगको रंग परिवर्तन गरिदिन्छन् ।
प्रत्येक महिलाहरु आफ्नो अंग गोप्य भएपनि अरुको भन्दा केहि फरक होस् भन्ने चाहन्छन् । तर यसमा उनीहरु आफ्नो यौन साथीले केहि नयाँपनको अनुभव गरोस् र आफुले पनि आत्मविश्वासका साथ यौनसम्पर्क गरेर अत्यन्त चरम सुख प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन् ।-डा. अमिर मरासी, स्त्री यौनअंग सर्जन
डा.मरासीले डेली मेल अनलाइनलाई बताएअनुसार प्रत्येक महिलाहरु आफ्नो अंग गोप्य भएपनि अरुको भन्दा केहि फरक होस् भन्ने चाहन्छन् । तर यसमा उनीहरु आफ्नो यौन साथीले केहि नयाँपनको अनुभव गरोस् र आफुले पनि आत्मविश्वासका साथ यौनसम्पर्क गरेर अत्यन्त चरम सुख प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले उनले कस्मेटिक सर्जरीमार्फत महिलाहरुको इच्छा अनुसारको यौनअंगको आकार परिवर्तन गरिदिन्छन् ।
दोश्रो कारण हो महिलाहरुले आफ्नो यौनक्षमतामा कमजोरी भएको महशुस गर्नु । उनले भने अनुसार जो महिलाहरु बच्चा पाउँछन्, तव उनीहरु आफ्नो यौनअंगको आकार खुकुलो र आकार बिग्रिएको महशुस गर्छन । उनले भने बिशेषगरी ३५ वर्ष पार गरेका महिलाहरु यस्तो महशुस गर्दछन् । साथै जो महिलाहरु कसिलो कपडा र भित्रि कपडा लगाउँछन् साथै घोडा, साइकल बाइक चढ्ने महिलाहरुले समेत यस्तो सोच्ने गर्छन । उनले यस्तो महशुस गर्ने महिलाहरुलाई परामर्शसहित सामान्य सर्जरीसमेत गरिदिन्छन् ।
उनले महिलाको यौनअंगको रंग परिवर्तन गर्नुका साथै यौन अंग मुलायम र जी स्पटको समेत सर्जरी गरिदिन्छन । जसले गर्दा महिलाहरु डा।मरासी भनेपछि मरीहत्ते गर्ने गर्दछन् ।
उनले अहिलेसम्म हलिउडका दर्जनौ साना ठूला मोडेलहरुको गोप्य यौनअंग बनाइसकेको स्वीकार्छन । उनले आफ्नो मेडिकल व्यवसाय सन् २०१० मा हाइटीमा गएको भूकम्पमा परेका मानिसहरुको निशुल्क मेडिकल शिविरबाट शुरु गरेका थिए । उनलाई महिलाको गोप्य अंग गुपचुप बनाउने भेजिना वीस्पेरियरको नाम चाँहि उनकै क्लिनिकमा काम गर्ने नर्सले राखिदिएकी थिइन । अहिले न्यूयोर्क सीटीमा उसै नामले चिनिन्छन् डा.मरासी ।